45 “‘Zvino imi pamunogova nyika kuti ive nhaka yenyu,+ munofanira kupa Jehovha mupiro,+ chikamu chitsvene panyika yacho;+ kana kuri kureba kwacho, chinofanira kuva chakareba makubhiti zviuru makumi maviri nezvishanu, kana kuri kufara kwacho, makubhiti zviuru gumi.+ Chichava chikamu chitsvene kupoterera miganhu yomupiro wacho wose. 2 Pauri pachava nenzvimbo tsvene yakareba makubhiti mazana mashanu uye yakafara makubhiti mazana mashanu, ichava nemativi mana akaenzana;+ uye ichava nenzvimbo yemafuro inosvika makubhiti makumi mashanu kurutivi rumwe norumwe.+ 3 Panzvimbo iyi yakayerwa unofanira kuyera nzvimbo yakareba makubhiti zviuru makumi maviri nezvishanu uye yakafara makubhiti zviuru gumi, uye nzvimbo tsvene ichava mairi, icho chinhu chitsvenetsvene.+ 4 Chikamu chitsvene chenyika yacho chichava chevapristi,+ ivo vashumiri venzvimbo tsvene, vaya vanoswedera kuti vashumire Jehovha.+ Ichava nzvimbo yedzimba, uye nzvimbo tsvene yeimba tsvene. 5 “‘Pachava nenzvimbo yakareba makubhiti zviuru makumi maviri nezvishanu nokufara makubhiti zviuru gumi.+ Ichava yevaRevhi, ivo vashumiri veImba yacho. Vachava nedzimba dzokudyira makumi maviri.+ 6 “‘Muchapa nzvimbo yakafara makubhiti zviuru zvishanu uye yakareba makubhiti zviuru makumi maviri nezvishanu, yakangoenzana nomupiro mutsvene, kuti ive nzvimbo yeguta.+ Ichava yeimba yose yaIsraeri. 7 “‘Nzvimbo yejinda ichava kurutivi rwuno nokurutivi urwo rwomupiro mutsvene+ norwenzvimbo yeguta, pedyo nomupiro mutsvene uye pedyo nenzvimbo yeguta, chimwe chinhu chiri kurutivi rwokumavirira nechokumavirira nechimwe chinhu chiri kurutivi rwokumabvazuva nechokumabvazuva. Kureba kwacho kuchange kwakangoenzana nomumwe wemigove yacho, kubvira kumuganhu wokumavirira kusvikira kumuganhu wokumabvazuva.+ 8 Nyika yacho ichava yaro pakati paIsraeri. Machinda angu haazoitirizve vanhu vangu utsinye,+ uye achapa imba yaIsraeri nyika maererano nemadzinza avo.’+ 9 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Zvakwana, haiwa imi machinda aIsraeri!’+ “‘Bvisai chisimba pamwe chete nokupamba,+ mururamisire nokuita zvakarurama.+ Chiregai kutorera vanhu vangu nechisimba,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. 10 ‘Munofanira kuva nechikero chakarurama neefa yakarurama nebhati rakarurama.+ 11 Panofanira kuva nechiyero chimwe chete chakatarwa cheefa nebhati, kuti bhati rienzane nechegumi chehomeri uye chegumi chehomeri chienzane neefa;+ kana iri homeri, chiyero chayo chinodiwa chinofanira kuva saizvozvo. 12 Shekeri+ rimwe chete rakaenzana nemagera makumi maviri.+ Mane yenyu inofanira kuva mashekeri makumi maviri, mashekeri makumi maviri nemashanu, mashekeri gumi nemashanu.’ 13 “‘Uyu ndiwo mupiro wamunofanira kupa, chikamu chimwe chete pazvikamu zvitanhatu zveefa chinobva pahomeri yegorosi, uye chikamu chimwe chete pazvikamu zvitanhatu zveefa chinobva pahomeri yebhari; 14 uye nokuda kwomugove wemafuta, pane chiyero chebhati chemafuta. Bhati, ndicho chegumi chekori. Mabhati gumi akaenzana nehomeri; nokuti mabhati gumi akaenzana nehomeri. 15 Gwai rimwe chete paboka, rinobva pazvipfuwo mazana maviri zvaIsraeri,+ nokuda kwechinopiwa chezviyo,+ nokuda kwechinopiwa chinopiswa chakakwana+ uye nokuda kwezvibayiro zvokugoverana,+ kuti vayananisirwe,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. 16 “‘Vanhu vose vomunyika yacho vachafanira kuuya nomupiro+ uyu kujinda racho rinenge riri pakati paIsraeri.+ 17 Jinda+ racho richafanira kupa zvinopiwa zvinopiswa zvakakwana+ nechinopiwa chezviyo+ nechinopiwa chinonwiwa+ munguva yemitambo+ nomunguva yokugara kwemwedzi+ nomunguva yemasabata,+ munguva yemwaka yemitambo yose yeimba yaIsraeri.+ Ndiro richapa chinopiwa chechivi nechinopiwa chezviyo nechinopiwa chinopiswa chakakwana nezvibayiro zvokugoverana, kuti riyananisire imba yaIsraeri.’ 18 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Mumwedzi wokutanga, pazuva rokutanga romwedzi wacho, unofanira kutora nzombe duku, mukono unobva paboka remombe, wakanaka,+ wotsvenesa nzvimbo tsvene pachivi.+ 19 Mupristi anofanira kutora rimwe ropa rechinopiwa chechivi oriisa pagwatidziro+ reImba yacho nepamakona mana orukuva rweatari rwakapoteredza+ nepamusoro pegwatidziro regedhi rechivanze chomukati. 20 Izvozvo ndizvo zvauchaitira munhu wose anokanganisa+ uye munhu wose asina zivo pazuva rechinomwe romwedzi wacho; uye imi munofanira kuyananisira Imba yacho.+ 21 “‘Mumwedzi wokutanga, pazuva rechigumi nemana romwedzi wacho, munofanira kuita paseka.+ Makeke asina kuviriswa ndiwo anofanira kudyiwa, zvauchava mutambo wemazuva manomwe.+ 22 Pazuva iroro, jinda richapa nzombe duku kuti ive chinopiwa chechivi nokuda kwaro iro uye nokuda kwevanhu vose vomunyika yacho.+ 23 Kwemazuva manomwe omutambo+ wacho rinofanira kupa Jehovha nzombe duku nomwe nemakondohwe manomwe, zvakanaka, kuti zvive chinopiwa chinopiswa chakakwana, zuva nezuva kwemazuva manomwe acho,+ uye gotora rembudzi kuti rive chinopiwa chechivi zuva nezuva.+ 24 Rinofanira kupa efa nokuda kwenzombe duku uye efa nokuda kwegondohwe kuti zvive chinopiwa chezviyo, uye kana ari mafuta, rinofanira kupa hini paefa imwe chete.+ 25 “‘Mumwedzi wechinomwe, pazuva rechigumi nemashanu romwedzi wacho, munguva yomutambo wacho,+ anofanira kupa zvakafanana neizvi kwemazuva manomwe,+ zvakafanana nechinopiwa chechivi, zvakafanana nechinopiwa chinopiswa chakakwana, zvakafanana nechinopiwa chezviyo, uye zvakafanana nemafuta.’”